Emailvisionvision Inoenderera Mberi ne SmartFOCUS | Martech Zone
China, April 14, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Makore apfuura, ndakashandira kambani hombe inonzi ASTECH InterMedia muDenver, Colorado. Iyo kambani yaive yekutanga dhatabhesi yekushambadzira kambani yeiyo pepanhau indasitiri uye inotungamirwa nemunhu mukuru (uye shamwari) Tom Ratkovich. Kudzoka apo tera yakanga isiri mumazwi, isu tanga tichigadzira nekuvaka akawanda-terabyte kushambadzira dhata dzimba kune mamwe mapepanhau makuru pasi rose.
Yakanga iri nguva inoshamisa uye yakatungamira kuenda kwangu kuIndipolis kunogadzira, kuvandudza nekushandisa matekinoroji ekushambadzira epa database yepepanhau. Isu tanga tichishandisa chishandiso chinonzi SmartFOCUS Viper mupepanhau, kuburikidza nefemu Praesage. Kubudikidza nekubatana, Bruce Taylor wePraesage akavaka zvekushandisa uye zvekushandisa izvo zvaive zviri pasi pano…
Iwo maturusi aive epamberi zvekuti ndakabata Tom ndikamuudza nezvavo… ndaisaziva kuti chii chaizotevera! Kambani yaTom yakatora maturusi ePraesage uye yakaendesa SmartFOCUS kune vatengi vayo. ASTECH InterMedia yakabva yatengwa naSmartFOCUS - kufambira mberi kukuru kune indasitiri yeUS.
Makore gare gare, kuburikidza nehukama nevamwe vashandi veindasitiri, yedu yakasimba yakashanda neemailvision. Emailvision ndeye wepasi rese email sevhisi ndiani ari kuwedzera chitsika chetsoka kupfuura email ne mobile. Ivo vachangotenga Chinangwa Marketer kunyura mune yemagariro enhau indasitiri ine rakakura revanhu kutsikisa uye kuyera chikuva.
Iye zvino, Emailvision iri kutenga SmartFOCUS. Izvi zvakanyatsobatanidzwa! SmartFOCUS yakanyanya kuve mutengi / server yakaiswa application asi ichangobva kuzivisa Software seSevhisi modhi. Sezvo ndamboziva yavo yekushandisa maturusi munguva yakapfuura, ndinogona kukuudza kuti kana aya masisitimu evashandisi akarova SaaS musika, iri mutambo-chinja indasitiri. SmartFOCUS yakashandisa kudhonza uye kudonhedza Venn -style query vavaki avo vakaita yekumberi dhatabhesi kushambadzira zvisingaite nyore. Yakasanganiswa neminda yakaverengerwa, chikuva chaive chakanakisa muindasitiri, uye dhatabhesi rezvivakwa raikurumidza kupfuura chero dhata rehukama randakamboshandisa.
Emailvisionvision ikozvino ine zvisungo zvakadzika pasi rese uye epamberi ekushambadzira maindasitiri. Ivo vanga vatova neemail kushambadzira uye nhare yekushambadzira chikuva iyo yakagadziriswa kuti ishandise ecommerce ... izvi zvabatanidzwa nekutenga zvinopa tekinoroji uye zviwanikwa zvevanhu zvinogona kuvaita ivo vakanyanya kushambadzira smart zvishandiso papasi.
Heino vhidhiyo ichangoburwa kubva kuchikwata ku Emailvision, zvakanaka kuona ivo vachiri kufara!
Inyika hombe, asi zvinoshamisa kuti mangani mahukama andinawo anoramba achisimuka pamusoro pebasa rangu. Ndiri kutarisira kuenderera mberi nekushanda pamwe ese emakambani uye nevanhu vakanaka!
Apr 15, 2011 pa 8: 17 AM
Yakakura posvo Doug. Ndiri kufara kuti wakafarira vhidhiyo zvakare - tarisira zvimwe mune ramangwana. 🙂